Akhriso :10- Su’aal oo Ra’isul Wasaare Kheyre lagu weydiinayo Mareykanka – XOGMAAL.COM
By Soomaaliya	 Last updated Apr 9, 2019
Ra’iisul Wasaarada Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo magaaladda Washington uga qayb galaya shir maaliyadda iyo deyn cafiska Soomaaliya ku saabsan ayaa laga doonayaa in uu ka jawaabo su’aalo badan oo muhiim ah, kuwaasi oo laga weydiin doono Wax qabadka xukuumaddiisa iyo caqabaha ku gaadaaman.
Mareeykanka ayaa waxaa uu kordhiyay Taageeraddda uu siiyo Soomaaliya waxaana uu gaarsiiyay $900 oo million halka uu markii hore siin jiray $500 oo million. Soomaaliya lacago kale ayey ka heshaa Beesha Caalamka, hadaba Ra’iisul wasaare Khayre waxaa laga doonayaa in uu sharaxo haddii uu jiro wax horumarin ah oo Dowladdu lacagahaas u adeegsatay ee dhinacyadda Amaanka, dhulka ay maamusho, dhaqaalaha iyo Waxbarashadda.
Majaladda Maqaalkaan daabacday ayaa qortay in Soomaaliya mushaarku uu badanyahay balse adeegyaddu ay yaryihiin marka loo eego Soomaaliland.
Hadii ay Soomaaliland mushaar yar ku qaban karaan Shaqo fiican maxaa Soomaaliya u diiday?
Waxaad Washington u joogtaa in aad kaalmo dheeri ah dalbato, Dowladaaduna waxay shati kaluumeeysi siiyay Shiinaha.
Su’aasha 8 aad: Maxay Soomaaliya u galeysaa Muranka Isreal iyo Falastiin.
Su’aasha 9 aad: Ma rumeysantahay in Turkigu uu yahay awood Soomaaliya xasilineysa?
Xildhibaan Axmed Fiqi oo warbixin dheer ka qoray Xogta ku gadaaman dhulka lagu heesto Muuse Suudi